तीन ठूला नदीमा पानीजहाज सञ्चालनको तयारी | Ratopati
personपत्रपत्रिकाबाट exploreकाठमाडौं access_timeकात्तिक २२, २०७६ chat_bubble_outline1
सरकारले मुलुकका तीन प्रमुख नदीमा जल यातायात सञ्चालनको तयारी गरेको छ ।
पश्चिमको गण्डकी, मध्यक्षेत्रको नारायणी र पूर्वको सप्तकोशी नदीमा जलयातायातको सम्भावना अध्ययन गरी पानीजहाज सञ्चालन गर्ने सरकारको तयारी छ ।
यी नदीमा सरकारले यात्रु तथा मालवाहक जहाज सञ्चालनका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्न लागेकोे हो । यी मध्ये कतिपय नदीमा सानो आकारमा स्टीमरलगायतका यातायात सञ्चालनमा छन् ।
सम्भाव्यता अध्ययनका लागि प्राविधिकसहितको टोली नदीमा खटाउन लागिएको नेपाल पानीजहाज कार्यालयले जनाएको छ । यो समाचार आजको कारोबार दैनिकमा दीपेन्द्र थापाले लेखेका छन् ।
Nov. 8, 2019, 9:55 a.m. Deepak
हेडलाइनमा संन्चालनकाे तयारी छ तर खबरमा सन्चालनकाे अध्ययनछ किन झुटाे हेडलाइन? सन्चालनकाे लागि अध्ययनकाे तयारी भनेमा के बित्थाे? अझ हृेडलाइन र खबरले सत्य तथ्य बाेलेकाे हुने थियाे यस्तै कुराले नेपाली पत्रकारीताकाे स्तर तथा विश्वसनियातामा अाच अाउने